मोरङका ५८ स्थानमा सीसीटीभी जडान
विराटनगर (अस) । मोरङका ५८ स्थानमा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ । प्रदेश १ सरकारको रू. १ करोड ५३ लाख ५८ हजार लागतमा उक्त सीसीटीभी जडान गरिएको हो । सोमवार आयोजित एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यसको उद्घाटन गरेका छन् ।
कार्यक्रममा मोरङका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले काठमाडौंपछि मोरङमा दोस्रो ठूलो नेटवर्कको रूपमा ६० किलोमिटरमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याइएको जानकारी दिए । पहिलो खण्डमा रानीदेखि महानगरको ढाँटसम्म, दोस्रो खण्डमा इटहरीको बूढीखोलादेखि भाउन्नेसम्म र तेस्रो खण्डमा पथरीदेखि उर्लाबारीसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याइएको उनले बताए । यो १० वर्षसम्म टिकाउ हुनेछ । अधिकारीका अनुसार आपराधिक घटनाको अनुसन्धान र निगरानीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी र बेलबारीबाट सीसीटीभी क्यामेराको मनिटरिङ हुनेछ ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राईले जडित सीसीटीभीले अपराध नियन्त्रण तथा निगरानीमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरे । आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर आपराधिक क्रियाकलाप निरुत्साहित पारिने उनले बताए । यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले महानगरभित्र ३२ ओटा सीसीटीभी जडान गरिसकिएको जानकारी दिए । महानगरले नगर सुरक्षा नियन्त्रण कक्षका लागि रू. २० लाख र सीसीटीभी क्यामेरा जडानका लागि रू. १० लाख सहयोग गरेको समेत उनले बताए । ‘हरेक टोल, वडाहरूमा समुदाय– प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं,’ उनले भने ।
विराटनगर रानीदेखि ढाटसम्म ३२ ओटा, इटहरीको बूढीखोलादेखि भाउन्नेसम्म १३ वटा र पथरीदेखि उर्लाबारीसम्म १३ ओटा क्यामेरा जडान गरिएको छ । तर निर्माणाधीन सडकका कारण विराटनगर क्षेत्रका क्यामेरा प्रयोगमा आएका छैनन् । प्रहरीले अब जिल्लाभर १५४ स्थानमा सीसीटीभी क्यामेरा मार्फत निगरानी गर्नेछ ।